Posted by Tranquillus | Sep 26, 2018 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Daawada: waa maxay?
Antidote waa software dhammaystiran oo lagu saxo qaladaadka naxwaha iyo qoraalka. Qalabkan xooggan wuxuu suurtagal ka dhigayaa in la isku geeyo isuduwaha Faransiiska iyo Ingiriisiga, qaamuusyada dhammeystiran, hagaha luqadda iyo qaybaha kala duwan ee dib u habeynta iyo kormeerida. Dhamaan arrimahan waxay suurtogal u tahay in si sax ah loo saxo qoraalladaada intaad ku badbaadinayso waqti, sababtoo ah is-beddelada aad ayey u dhaqso badan yihiin.
Yuu la hadlayaa? Labadaba shakhsiyaad iyo xirfadlayaal. Runtii, softiweerkan waxaa adeegsada guud ahaan dadweynaha oo aad ayey ugu riyaaqeen xirfadlayaal waqti badan ku lumiya sixitaanka qoraalladooda. Antidote waxay si fudud isugu dhejisaa kuwa la tartamaya, maxaa yeelay way ku dhan tahay dhammaan qodobbada ay saxdo (naxwaha, higgaadinta, iwm.) Taas oo aan ka jirin aaladaha kale ee ganacsiga inta badan.
Waxaa intaa dheer, taas fur-in kalimad sidoo kale ka shaqeeya online, waayo, qorayaasha web ama ku qora bixio raadinaya si loo badbaadiyo waqtiga iyo soo gaabin waqtiga loo maqli karo ama xitaa wax Faydi haddii aadan haysan Waxaa muhiim ah in loo baahan yahay qoraal akadeemiyadeed.
Antidote, ma runbaa faa'iido leh?
Isticmaalidda barnaamijyada qaabaynta qaabaynta qaababka isticmaalka xirfadlaha ah waxay u egtahay mid aan caqli gal aheyn oo xitaa ay dhib u geysato tusaale ahaan qoraay khibrad leh ama wariye.
Sidaa darteed, waxaa laga yaabaa in aan u maleyno in Antidote ay noqon doonto mid xiiso leh oo kaliya dadka qaba welwelka qarsoodiga ah iyo walxaha, ama tusaale ahaan qof aan wadani ahayn.
Runtii, software kanaalkan waa mid aad waxtar u leh tan oo si sahlan u muuqan kara muuqaalka. Shirkado iyo shirkado badan iyo hay'ado maxalli ah ayaa adeeggan u adeegsanaya shaqaalahooda si ay u sarreeyaan heerka kor ku xusan.
Taas macnaheedu, Antidote waxay ufiican tahay xirfadlayaasha aan ku qanacsanayn luuqada Molière ee qoraalka iyo kuwa doonaya in ay wali sii bixiyaan tayada tayada, si ay u kobciyaan qoondaynta, qoraan waraaqo ama xarfo tusaale ahaan.
READ Shan talooyin si loo fududeeyo jumladahaaga
Laakiin markaa ... Sidee Antidote u isticmaali karaa qoraa xirfad leh?
In kasta oo ay iska cadahay in softiweerku uusan daruuri u noqon doonin mid waxtar weyn u leh sixitaanka ku dhowaad hingaadda aan jirin iyo qaladaadka luuqadda, haddana waa heerka qaabeynta iyo xarakaynta aaladdan layaabka leh!
Meelaha ka dambeeya ":", calaamadaha, caasimadaha iyo qodobbada kale ee loo adeegsado waxay u muuqdaan kuwo 100% ay adag tahay in la barto, xitaa xirfadle warshadaha ka shaqeeya, sidoo kale marar badan ayaa laga tagaa inta lagu jiro wejiga koowaad ee qorista. Runtii, xoog saarida mawduuca iyo astaamaha isla waqtigaas waa mid aad u adag markii la qorayo maqaal tusaale ahaan wayna gaabinaysaa qoraalka.
Ugu dambeyntii, Antidote sidoo kale waa aalad waxbarasho oo dhab ah, oo ku habboon ardayda ama xirfadlayaal cusub oo doonaya inay horumariyaan xirfadahooda. Software-ka kuma qanacsana inuu saxo cilladaha; Faafaahinta macluumaadka ayaa u soo geli doonta qalad kasta si loo sharaxo halka uu cilladani ka timid, si aan qalad la mid ah mar labaad u dhicin. Habkani wuxuu si dabiici ah kuu oggolaanayaa inaad ku horumariso heerkaaga luqadeed muddo ka dib, oo leh xaalado nolosha dhabta ah.
Qalabka laba luqoodka ah ee adeega oo dhan
Sida qalab tixraac ah oo Kanada ah, ma adagtahay in la fahmo in Antidote ay tahay qalab ka shaqeeya Faransiis iyo Ingiriis labadaba, taasina waxay kuu oggolaanaysaa inaad iska ilaaliso inaad lumiso saacado si aad u hubiso haddii aad ku qori lahayd luqad. luuqad aanad aqoon u lahayn dhammaystirida sida Ingiriisiga; ama horumarinta xirfadahaaga luqaddan si la mid ah sida haddii aad u isticmaashay Faransiis si loo hagaajiyo heerkaaga Faransiis.
Software-kan sidoo kale wuxuu leeyahay faa iidada ugu weyn, waa awood ku filan in lagu aqoonsado luqadda loo adeegsaday qoraalka ama muujinta, mararka qaarkood xitaa wuu ka fiicanyahay Word laftiisa! Waxqabadkaan, oo umuuqda mid aan waxba galabsan, hadana waa muhiim: qalad xaga fahamka luuqada ah wuxuu noqon karaa mid dhib badan. Runtii, ereyada Ingriisiga ah ee kujira qoraalka faransiiska way wareeri karaan oo si otomaatig ah ayaa loo tarjumi karaa hadaadan ka taxadarin oo si kadis ah, oraah faransiis ah oo loo isticmaalo luuqada Ingriisiga sida "déjà vu" tusaale ahaan waxay carqaladeyn kartaa softiweerka sida xun loo qorsheeyay
Waa qalab lagama maarmaan ah oo loogu talagalay dhammaan daabacadaha qoraalada iyo copywriting
Haddii ay jirto hal nooc oo ganacsi ah oo ay tahay inay gabi ahaanba u hesho barnaamij ka-hortag ah, waa hay'adaha tifaftirka iyo nuqul-qorista!
Xaqiiqdii, hay'adahaasi waxay badanaa u muuqdaan inay ka baxaan shaqooyin aad u tiro badan, isticmaalka qalabka sixitaanka sida Antidote waxay kuu oggolaan doontaa inaad yareyso hawsha dib u celinta saacadaha halkii saacadood.
Iyada oo qayb ka ah mashruuc gudaha ah, qalabaynta kooxahaada Antidote ayaa xitaa kuu oggolaan doonta inaad ka gudubto marxaladda replay, taas oo noqon doonta wakhti muhiim ah oo ilaaliya.
Xirfadlayaasha ayaa sidaas darteed qaar badani u socdaan iyada oo loo marayo nidaamkan habdhaqanka si loo xaddido wakhti dheeraad ah si loogu qoro shaqada. Sidaas daraadeed waa muhiim in la shaqeeyo noocyadan software si loo helo natiijooyin wax ku ool ah iyo wax soo saar sare, laakiin sidoo kale waa sharci ahaan in la yaabiyo haddii antidote uu yahay xal sax ah oo ka mid ah dhammaan software-ka nidaamka jira.
Antidote, qalabka saxda ah ee ugu waxtar badan?
Marka aan ka hadalno baaritaanka higgaadinta, ma ahan qasab inaan ka fekerno Antidote marka ugu horeysa iyo xalalka Faransiiska inta badan waxay u muuqdaan kuwo cad.
Robert Correcteur ama ProLexis yaryar ayaa weli tixraacaya in dad badan oo doonaya in ay mudnaan u yeeshaan, laakiin ma aha qasab ah doorasho aad uwanaagsan.
Iyadoo software 2 waa mid aad u awood badan marka la eego waxqabadka, ergonomics runtii weli loo doonayaa, iyaga ay heerka checkers higaada Diintooda sida goobaha badan ee noociisa ah BonPatron.
READ Sidee loo qoraa warbixin xirfadeed?
Haddii mid ka mid ahaayeen in ay sii saxo si dhab ah wax ku ool ah laba kaliya ee suuqa, su'aasha dhabta ah run ahaantii kac u dhexeeya 9 iyo fiqiira Cordial Pro. Kuwani waa laba software oo tayo leh, laakiin nasiib darro ma lamid ah isla, ka tago ka danbeeya diiran Pro fiqiira 9.
Marka laga soo tago qiimaha, waxaa ugu weyn ee Cordial Pro oo ka dhan ah Antidote waxaa lagu soo koobi karaa xaqiiqda ah in ay ka shaqeyso Faransiis, oo ka duwan Antidote oo ah qalabka laba-luqad-yaqaan ee suuqyada.
Haddii aad tahay nooca ka shaqeeya labada luuqadood, su'aashu xitaa ma soo baxdo!
Dhib kale oo ah, saxitaanku wuxuu xaqiiqo ahaan ka badan yahay Antidote, sababtoo ah waxay taageertaa jamac iyo jibbaarba labadaba waxaadna ku siineysaa inaad doorato inta u dhexeysa labada goorta xukunku aanu caddayn. Cordial Pro oo dhinac ah ayaa awood u leh in ay la shaqeeyaan oo keliya keli keli ah haddii aan la ogaan karin.
Ugu dambeyntiina, barta ugu dambeysa ee aan ugu yarayn, Cordial Pro ayaa waxyar ka qaalisan tartameheeda, 199 € celcelis ahaan; sidaa darteed waxay umuuqataa mid aad uga qaalisan marka loo eego Daawada!
Antidote, softiweer wax ku ool ah haa, laakiin qiimahee waa imisa?
Ka dib akhrintaan ka dib, waxay u muuqataa inay cadahay in Antidote ay tahay software muhiim ah ee xirfadle kasta iyo qof kasta oo raba inuu sameeyo qoraalo nadiif ah oo wanaagsan. Laakiin su'aash aad u muhiim ah ayaa soo baxaya, waa maxay qiimaha software noocan oo kale ah?
Nooca ugu dambeeyay ee software-ka ayaa hadda ah boqolkiiba boqol euro. sidaas darteed laba jeer waa ka raqiisan yahay tartanka tooska ah ee loogu talagalay waxyaabo badan oo dheeraad ah ...
Marka, qiimahan, maxaad u bixi la'dahay?
Sidee si dhakhso ah u hagaajineysaa hingaadka dukumintigaaga, helitaanka software antidote. Nofeembar 21st, 2018Tranquillus
horeDhaleecaynta dhismaha ayaa soo saari doonta, hela.
socdaSidee dib loogu soo ceshan karaa dhiirigelintaada kadib xilliga adag?